भारतका अगाडि देउवा सरकार लम्पसार पर्‍यो, छाङ्ग्रु र तिन्करमा जनगणना गर्न जान भारतले बाटाे दिएन
November 22, 2021 N88LeaveaComment on भारतका अगाडि देउवा सरकार लम्पसार पर्‍यो, छाङ्ग्रु र तिन्करमा जनगणना गर्न जान भारतले बाटाे दिएन
स्वेच्छा राउत व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने छाङ्ग्रु र तिन्कर गाउँ करिब १२ किलोमिटर दूरीमा छन्। क्रमशः ३२ सय मिटर र ३६ सय मिटरको उचाइमा। हिउँद लागेपछि ती दुवै गाउँमा बस्न नसकिने हुन्छ। प्रत्येक वर्ष तिहार मनाइसकेर त्यहाँका गाउँलेहरू ओरालो लाग्छन्। बस्तुभाउ, भाँडाकुँडासहित भारतको बाटो हुँदै दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गा पुग्छन्। छ महिना […]
कांग्रेस अधिवेशन : बुढो पार्टीमा तन्नेरी प्रतिनिधि
November 22, 2021 N88LeaveaComment on कांग्रेस अधिवेशन : बुढो पार्टीमा तन्नेरी प्रतिनिधि
काठमाडौं । सोलुखुम्बुकी पूजा फुयाल २१ वर्षकी मात्र भइन् । नेपाल विद्यार्थी संघमा क्याम्पस तहको राजनीतिमा रहेकी पूजा १४ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएकी छन् । पार्टीको केन्द्रीय सभापतिदेखि सिंगो कार्यसमिति चयनका लागि मतदाता रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन युवाहरूका लागि सहज छैन, कांग्रेसमा । तर उनी पार्टीको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा पनि सर्वाधिक मत ल्याएर […]
एमालेमा महासचिवको रोचक प्रतिस्पर्धा: हुँदैछ यी पाँच नेताको भिडन्त
November 22, 2021 N88LeaveaComment on एमालेमा महासचिवको रोचक प्रतिस्पर्धा: हुँदैछ यी पाँच नेताको भिडन्त
काठमाडौं । एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अब को महासचिव बन्ला भन्ने चासो बढेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संकेत नगरेका कारण महासचिव पदका आकांक्षी नेता खुलेका छैनन्। तर, चार नेताले भित्रभित्रै महासचिव पदका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन्। अध्यक्षपछि दोस्रो कार्यकारी र शक्तिशाली पद मानिन्छ, महासचिव। उपमहासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य […]
प्रधानमन्त्री देउवालाई राजा वीरेन्द्रकै हैसियतमा प्रमुख अथिति बनाएर स्वागत गर्दै भारत
November 22, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री देउवालाई राजा वीरेन्द्रकै हैसियतमा प्रमुख अथिति बनाएर स्वागत गर्दै भारत
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले औपचारिक रुपमा छिमेकी वा मित्र राष्ट्रको राजकीय भ्रमण गरेका छैनन् । देउवालाई छिमेकी देश भारतले स्वागत गर्ने तयारी गरेको छ । स्कटल्याण्डमा साइडलाइन वार्तामा समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भारत भ्रमणमा आउन निमन्त्रणा दिइसकेका छन् । तर यसपालि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण विगतका राजाकै हैसियतमा हुने भएको छ । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका […]
November 22, 2021 N88LeaveaComment on ठूला ठूला नेताले छोड्दै गएपछि माओवादीमा एक्लिएका प्रचण्डले के भने?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले एक्लिएका छन् । सहयोद्धा नेताहरुले धमाधम साथ छोडेपछि प्रचण्ड चिन्तित पनि छन् । नेताले साथ छोडे पनि जनताले नछोडुन भनेर जिल्ला जिल्ला चहारिरहेका छन् । यस्तो रातोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले माओवादीका नेताहरु एमालेमा जानु राम्रो संकेत नभएको बताए । यस्तो छ अन्तर्वार्ताको अंश माओवादीबाटै निर्वाचित केही सांसदहरु […]
निधिले गरे देउवा सरकार ढल्ने संकेत, माैलाउँदै राजनीतिकाे फाेहाेरी खेल
November 22, 2021 N88LeaveaComment on निधिले गरे देउवा सरकार ढल्ने संकेत, माैलाउँदै राजनीतिकाे फाेहाेरी खेल
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकार ढल्ने संकेत गर्दै अहिलेको सरकार वैशाखीको सहारामा हिँडिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनमा सरकार बनेको भन्दै उनले वर्तमान सरकार वैशाखीको सहारामा हिँडिरहेको बताएका हुन्। आइतबार नेपाली कांग्रेस नगराईन नगरपालिकाको नगर अधिवेशन उद्घाटन गर्दै निधिले कांग्रेसको एकल सरकार नबनेसम्म जनताको सबै माग सम्बोधन हुन समस्या रहेको जिकिर […]
चोलेन्द्र राणाले पैसा लिएर गरेका फैसला खोज्दै बार
November 22, 2021 N88LeaveaComment on चोलेन्द्र राणाले पैसा लिएर गरेका फैसला खोज्दै बार
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले दिएको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले पैसा खाएर गरेको फैसलाको सूचना भए नेपाल बारमा उपलब्ध गराउन कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूलाई […]
‘वाक थ्रु’को संकेतले समातियो भित्रीवस्त्रमा लुकाइएको आधा किलो सुन
November 22, 2021 N88LeaveaComment on ‘वाक थ्रु’को संकेतले समातियो भित्रीवस्त्रमा लुकाइएको आधा किलो सुन
काठमाडौं । आइतबार बिहान १०: ४५ बजे नेपाल एयरलाइन्सको विमानमार्फत भक्तपुरकी राधिका बुढाथोकी काठमाडौं ओर्लिन् । अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको ‘वाक थ्रु’मा प्रवेश गर्नुअघि उनलाई कसैले शंका गरेनन्। यूएईबाट सुन आउने भएकाले त्यहाँबाट आउने हरेकजसोमाथि विशेष निगरानी हुन्छ । तर बुढाथोकीलाई शंका गर्नुपर्ने त्यस्तो खास कारण थिएन । ‘वाक थ्रु’मा रहेको मेटल गेटमा उनी हिँड्दा फरक आवाज […]
महाधिवशेनका विषयमा भीम रावलले राखे यस्तो गुनासो, खै कसले सुन्ने कठै !
November 22, 2021 N88LeaveaComment on महाधिवशेनका विषयमा भीम रावलले राखे यस्तो गुनासो, खै कसले सुन्ने कठै !
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको आसन्न महाधिवशेनका विषयमा छलफल गर्न खोज्दा पार्टीभित्र कसैले पनि रुची नदेखाएको गुनासो गरेका छन् । सोमबार ललितपुरस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रावलले उपाध्यक्षको हैसियतले आफूले १०औँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा विषयका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्न चाहे पनि रुची नदेखाएको गुनासो […]
विमलेन्द्र निधिको कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी किन ? यी हुन् २३ कारण
November 22, 2021 N88LeaveaComment on विमलेन्द्र निधिको कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी किन ? यी हुन् २३ कारण
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा उठ्ने भएका छन्। उनले आफू सभापतिमा उठ्नुपर्नाका २३ कारण पनि सार्वजनिक गरेका छन्। जनकपुरमा रहेका निधिले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् सभापति पदमा उम्मेदवारी दिनुपर्नाका कारण सार्वजनिक गरेका छन्। उनले वैचारिक रूपमा स्पष्ट कांग्रेस, एकतावद्ध कांग्रेस र गतिशील कांग्रेस भन्ने नारासमेत अगाडि सारेका छन्। […]